App Store သည်အယ်ဒီတာအကြောင်းအရာများကို iOS 11 တွင်စတင်ပြသသည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Luis Padilla | | iOS 11, အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ
ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လက iOS 11 တွင်ကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့စဉ်ကစိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးသောအပြောင်းအလဲတစ်ခုမှာ App Store အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကုန်လွန်သွားသောအသွင်အပြင်ဖြင့် Apple သည်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းလှမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် အက်ပလီကေးရှင်းများပြသမှုနည်းသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုပြသပြီး ပို၍ အသေးစိတ်ကျသောအကြောင်းအရာများကိုပြသရန်ဆက်တိုက်စာရင်းများကိုနှိပ်ပါ.
အယ်ဒီတာအကြောင်းအရာများနှင့်ဂိမ်းများအတွက်သီးခြားကဏ္showများကိုပြသရန်အဖုံးပေါ်ရှိကဏ္ sections အသစ်များသည်အသစ်အဆန်းအချို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် iOS 11 beta ကိုသုံးသောသူများသည်လျှောက်လွှာတင်သည့် အချိန်မှစ၍ လျှောက်လွှာတွင်မည်သည့်သတင်းမျှမတွေ့ရပါ။ ဒီနေ့ Apple ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အချို့သောအပြောင်းအလဲများကိုဤကဏ္sectionsများတွင်တွေ့မြင်နေရသည်.
ကဏ္ new သစ်များသည်theရိယာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ ဒီတော့အမေရိကန်ဘလော့ဂ်ကစပိန်မှာရှိတဲ့ Game of Thrones (သို့) Pokemon Go ကိုရည်စူးထားတဲ့အခန်းကဏ္ with တွေပါတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုပြနေစဉ် အသစ်သောအယ်ဒီတာ့အခန်းကဏ္aတွင် developer တစ် ဦး သည်သေးငယ်သော mockups များနှင့်သူတို့၏ဂိမ်းများကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်ကြောင်းပြောဆိုသည်သို့မဟုတ်တင်းနစ်နှင့်ဖုတ်ကောင်အကြောင်းဂိမ်း။ Day One သည်နေ့၏အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအိမ်မှထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲပုံသဏ္getာန်ရရှိနိုင်မည့်အက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ App Store ၏မျက်နှာဖုံးတွင်တွေ့နိုင်သည်။
ဂိမ်းများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုရည်စူးထားသောကဏ္sectionsများသည်ပေးဆောင်ရသောအခမဲ့ဂိမ်းများ၊ ထိပ်တန်းအမျိုးအစားများနှင့်ပြိုင်ပွဲကဲ့သို့သောဂိမ်းအမျိုးအစားအချို့နှင့်အတူပိုမိုရိုးရာရှုထောင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အပြောင်းအလဲများတွင်ဂိမ်းများ၏ဖော်ပြချက်များထဲမှဗီဒီယိုများ၏ပိုမိုသက်ဆိုင်မှုပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ကစားပေးသောကြောင့်အလွန်ကောင်းသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များနှုန်းကျဆင်းစေနိုင်သည်။ developer များအနေဖြင့်အသုံးပြုသူထင်မြင်ယူဆချက်များကိုတုန့်ပြန်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မည်ကိုသတိရပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခုအချိန်အထိအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်မကြာမီကာလအတွင်းဖြစ်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းအက်ပ်များ » အိုင်ဖုန်းဂိမ်းများ » iOS 11 တွင်အက်ပလီကေးရှင်းသည်အယ်ဒီတာအကြောင်းအရာများကိုစတင်ပြသသည်
developer များထံမှတုံ့ပြန်မှုများကို App Store တွင်တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးလိုပါသည်။ ဒီမှာနမူနာတစ်ခုရှိတယ်။ https://www.instagram.com/p/BWA-trNhOfw/?taken-by=apperlas&hl=es